သံမဏိဥယျာဉ်မြက်ခင်း Edging ဓား - တရုတ် Richina
သံမဏိဥယျာဉ်မြက်ခင်း Edging ဓား
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: CV ကို-027
ယေဘုယျအား Length: 100cm
သံမဏိ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း စွန်ခံအပါအဝင် Tools များ, ရိုးရာစတိုင်စိုက်ပျိုးမှု Tools များ, အရွက်ထွန်ခြစ်,ဒတ်ခ်ျဟိုး , မြေဆီလွှာ rkae, ဓါး edging
သံမဏိ Edging ဓား
သစ်မာနှင့်အတူဥယျာဉ်တော် Eding ဓား သာ. ကြီးသက်တမ်းများအတွက်ကိုငျတှယျ
20 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့ tools တွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုအထူးသဖြင့်အထူးပြုနေကြသည် ဥယျာဉ်တော် Tools များ , stainless တူးလူတွေနှင့်ချိတ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပ, အမေရိကန်, ကနေဒါတင်ပို့နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲစျေးနှုန်းများနှင့်ထောက်ထားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ poleasure ဖြစ်ပါတယ်။
စံပြ stainless ရိုးရာ Edging ဓားထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်မြက်ခင်း Edging ဓားအရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့တစ်ဝက်မွန်းဥယျာဉ်မြက်ခင်း Edger ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
1 ဥယျာဉ် Tool ကိုခုနှစ်တွင် 4
ကာဗွန် Steeel ဥယျာဉ်အစားထိုးကုသမှု
ကာဗွန်သံမဏိဥယျာဉ် H ကို andle Tools များ
ကာဗွန်သံမဏိဥယျာဉ် Tools များ
စျေးပေါတဲ့ဥယျာဉ် Tool ကိုသတ်မှတ်မည်
ကလေးများဥယျာဉ် Tools များ
ဥယျာဉ် Tool ကို
ဥယျာဉ် Tool ကိုသတ်မှတ်မည်
မီးသီးစိုက်ပျိုးကျင်းပဥယျာဉ် Tools များ
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းလက် Tools များ
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tools များ
ကလေးများ ဥယျာဉ်တော် Tool ကို
Ladies ဥယျာဉ် Tools များ
Mini ကိုဥယျာဉ် Tools များ
သစ်ဒီဇိုင်းဥယျာဉ် Tools များ
ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ် Tools များ
ပလတ်စတစ်ဥယျာဉ် Tool ကို
Printed ကလေးများဥယျာဉ် Tools များ
stainless Steeel ဥယျာဉ်အစားထိုးကုသမှု
သံမဏိဥယျာဉ်လက် Tools များ
သံမဏိဥယျာဉ် Tools များကိုင်တွယ်
သံမဏိဥယျာဉ် Tools များ
Wood ကလက်ကိုင်နှင့်အတူဥယျာဉ်တော် Weeder နှင့်မြက်ခုတ်သမား
သံမဏိ3Prong စိုက်ပျိုးမှု